Omeko finoana miha lehibe | Fondation des Choisis de Jésus
Omeko finoana miha lehibe
1C_31: Anaka, henoy mandrakariva Aho ! Ataovy ao an-tsainao foana ny Fitiavako anao ! Tohizo ny fibanjinanao Ahy ! Ekeo ny Fitiavana Anao ! Aoka ho bitika mandrakariva ianao ! Ao anatin’ny fahakelezanao no miafina ny Fitsaharako sy ny Fitiavako. Omeko finoana miha lehibe hatrany ianao. Raiso ny finoana, tsy noho ny fahamendrehanao fa noho ny Fahasoavako sy ny Fitiavako. Omeko anao ny Fiadanako.